Wararkii ugu dambeeyay magacaabista Ra'iisul Wasaaraha cusub | Keydmedia
Wararkii ugu dambeeyay magacaabista Ra’iisul Wasaaraha cusub
Mashquulkii ugu xooganaa ayaa haatan ka jiro gudaha Madaxtooyada, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa in lagu dhawaaqo xilka Ra'iisul Wasaaraha cusub.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu saacadaha soo socdo ku dhawaaqo Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka, kaasoo bedelaya Xasan Cali Kheyre oo 25 bishii la soo dhaafay sifo sharci darro ah lagu riday.
Mashquulkii ugu xoogganaa ayaa haatan ka jiro gudaha madaxtooyada Soomaaliya, waxaana socdo la tashiyadii ugu dambeeyay uu madaxweynaha la yeelanayo la taliyaashiisa gaarka ah oo ku aadan magacaabista Ra'iisul Wasaaraha cusub.
Siyaasiyiin horey xilal sare u soo qabtay iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaaaadda Soomaaliya ayaa ka muuqdo liiska magacyada ragga loo saadaalinayo xilka Ra'iisul Wasaaraha, waxaana soo xoogeysanaya gooxa ku dhawaaqista Ra'iisul Wasaaraha.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu go'aan ku gaaray shaqsigii uu magacaabi lahaa, islamarkaana balan qaadyo u sameeyay shaqsiyaad rajo hore ka lahaa xilkaan, kuwaas oo haatan iska quustay.
Raiisul Wasaaraha ayaa loo saadaalinayaa in uu ka imaanaya Beelaha Hawiye gaar ahaan Beesha Abgaal, waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in xilkaan loo magacaabi doono Cali Maxamed Geeddi oo mar soo ahaa Ra'iisul Wasaaraha dowladdii ku meel gaarka aheyd ee Cabdullaahi Yuusuf.
Madaxweynaha ayaa doonayo in uu si deg deg ah ku soo magacaabo xilka Ra'iisul Wasaaraha cusub maadaama muddada dastuurka u ogaalanayo ay ka harsantahay wax ka yar 48 saacadood.
Wixii ku soo kordho KON kala soco inshallaah.